162 kun ee Sweden timid sannadkii hore – 500 keliya shaqo ka heshay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
162 kun ee Sweden timid sannadkii hore – 500 keliya shaqo ka heshay
La daabacay tisdag 31 maj 2016 kl 10.35
tiro yar oo la siiyey ogalaanshaha shaqada
sawir: Stig-Åke Jönsson och Fredrik Sandberg / TT
Sannadkii hore dad kor u dhaafaya 162.000 ayaa Iswiidhan iska dhiibtay oo magangeliyo ka dalbatay.
Laakiin tiro aad u yar ayaa ogalaansho shaqo ka helay hey’adda socdaalka ee Migrationsverket, halka tiro aad u hooseysay – oo guud ahaan ah 494 ruux keliya ay ka shaqo bilaabeen Sweden.
Si hadaba qofka Sweden ku cusub uu u sii shaqeysto inta uu sugayo sharciga deganaanshaha waxaa looga baahanyahay in uu la yimaado aqoonsi aan waqtigiisa dhacinin ama waa in uu si kale ku cadeeyaa cidda uu yahay.
Haddii qof cadeeyo aqoonsigiis marka uu Iswiidhan iska dhiibayo oo magangeliyo ka dalbanayo markas waxay hey’adda socdalka baarisay sidii ruuxan loo siin lahaa ogalaasnho uu ku shaqeeysto inta uu sugayo jawaabta dalabkiisa magangeliyo doon.
Haddii markaa ruuxa magangeliyo doonka ah buuxiyo dhamaan shuruudaha ogalaasnho uu ku shaqeysan karo iyadoo islamarkiiba la siinayo ogalaashaha. Laakiin sidaas oo ay tahay wax ka yar saddex meelod mid ka mid magangeliyo doonka da’dooda u dhaxeyso 20-64 ayaa sannadkii hore helay ogalaanshaha shaqada.
– Tiro aad u faro badan magangeliyo doonka ay Sweden iska dhiibtay sannadkii hore. Sidaas darteed waxaan ku qasbanaanay in aan howlaheena shaqo qarkod dib u dhigno, howlaha aanan ahmiyadda saarin waxaa ka mid ah ogalaanshaha shaqada, ayey Lisa Bergstrand madax ka ah waaxda qaabilaada hey’adda socdaalka.
Dawladda ayaa ku talisay in sharciyada deganaanshaha ee la siiyo qaxootig laga dhigo ku meel-gaar saddexda sanno ee soo socota. Qofkii shaqo keensadana la siiyo sharci deganaansho oo rasmi ah marka uu ka dhaco sharciga ku-meel-gaarka ah. Midas ayaa ku qasbi doonta magangeliyo doon badan in ay shaqo raadsadan si ay u helaan sharci degenaansho oo rasmi ah.
Laakiin waqtiga la sugo jawabaabaha hey’adda socdalaaka ayaa hadda gaarsiinsan wax ka badan hal.